I-Rookery Cottage - I-Airbnb
Coon Rapids, Iowa, i-United States
Le ndlwana esemaphandleni iyindawo ethulile enkabeni ye-Middle Raccoon River Valley. Ehlelwe ku-acreage yethu yangasese, indlwana ibheke ukuncoma nengadi. Ngokusondelene ne-Whiterock Conservancy, izivakashi zingakwazi ukufinyelela kalula ukuhamba ngezinyawo nemizila yamabhayisikili yasezintabeni noma zasemfuleni oseduze.
I- "rookery" iyindawo yokutshuza yama-herons, inyoni encamela indawo ethulile, engadingi ukulungiswa eduze kwamanzi. Ngakho-ke i-Rookery Cottage ifuna ukuhlinzeka ngokuphunyuka kwemvelo kusuka ku-grind yansuku zonke.
Lesi sakhiwo sasivame ukuba isitolo sezimbali futhi sakhiwa kusetshenziswa ibhodi lenqolobane eliphinde labekwa kabusha nezinye izinto ezibekwe kabusha. Sayishintsha yaba yindlu yezivakashi kodwa sagcina ubuhle obuningi basemaphandleni. Inezindawo zaphansi ezinethezekile ezifudumele (i-redone ebusika 2021) kanye ne-A/C. Ikhishi elinosinki, izitsha/izitsha, ifriji encane, i-microwave, i-toaster, i-skillet kagesi, nomshini wekhofi. Ngaphandle kwalokho, i-Weber amalahle grill nomgodi womlilo ungasetshenziselwa ukupheka ngaphandle. Sinikeza ikhofi, ukhilimu/ushukela, ama-condiments ayisisekelo kanye nohlobo lwetiye.
I-Rookery Cottage ingalala izivakashi eziyisithupha. Kunemibhede emibili emikhulu ne-futon.
SICELA UQAPHELE: Kukhona i-TV/i-DVD player kodwa ayikho ikhebula noma i-inthanethi endlwaneni. Noma kunjalo, i-wifi esendlini yethu ingafinyelelwa egcekeni uma kudingeka. Futhi, amanye amaselula ngeke abe nesevisi lapha. Phumula futhi ukhiphe amapulagi!
amamayela angu-3.5 ukuya e-Con Rapids.
Amamayela angu-25 ukuya e-Guthrie Center, e-Virubon, e-Carroll noma e-Jefferson.
Amamayela angu-60 ukuya e-Des Moines.
100 amamayela ukuya e-Omaha.
Lena indawo ephephile. Abantu abavela kuzo zonke izizinda zokuphila bamukelekile lapha.
Ikhaya lethu kanye nebhizinisi elincane lokulungisa izinjini zitholakala ku-acreage efanayo. Singabantu-abantu futhi siyakujabulela ukuhlangana nezivakashi zethu. Sicela uzizwe ukhululekile ukusibambela ingxoxo, ngaphandle kwalokho, siyajabula ukukunikeza indawo evulekile yokuphumula nje futhi ujabulele ukuthula nokuzola.
Ikhaya lethu kanye nebhizinisi elincane lokulungisa izinjini zitholakala ku-acre…